Karaa Rabbii irratti nama yaamuun salphaa tahuu dhabuu mala! - NuuralHudaa
On Jul 24, 2021 4
Anbiyoota Rabbii dabalatee namoonni karaa Haqaatti da’waa godhaa turan hundi rakkoo keessa ni darban.
Nabiyullah Ibraahim (aleyh salaam) da`awaa babal’isuu irraa isa dhoowwuuf dhiibbaan abbaa fi ummata isaa irraa isa qunnamee ture. Garuu inni dhiibbaa kanaaf gadi jechuu ni dide. Amantii isaatiif jedhee nafsee fi qabeenya isaatiin wareega kafaluun karaa isaa itti fufe. Kanaafi, Rabbiin akkana jechuun isa faarse:
“Dhugumatti, Ibraahimii fi warra isa waliin turan keessa itti hidhannaa gaariin isiniif ta’eera. Yeroo isaan ummata isaaniitiin, “Dhugumatti, nuti isinii fi wanta isin Rabbiin alatti gabbartan irraa qulqulluudha, isin morminee jirra. Hanga Rabbii Tokkichatti amantanitti nuu fi isin jidduutti diinummaa fi jibbummaan abadii ifa bahee jira.” jedhan, [itti hidhannaa gaariitu isiniif jira.] Jecha Ibraahim abbaa isaatiin: ‘Araarama siif kadha, [adabbii] Rabbii irraa homaa siif gochuu hin danda’u.’ jedhe malee. Gooftaa keenya sirratti hirkanne, gara Keettis deebine, deebiin garuma keeti. ” Suuratu Al-Mumtahinah 60:4
May 16, 2022 sa;aa 10:22 pm Update tahe